नसिबलालकाे नसिब ! – www.visionfm.org
नसिबलालकाे नसिब !
गाडी मालीक,पुगे सडकमा
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २४, २०७४ समय: ३:२६:३६
ओखलढुंगा- मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालीका– ५ आँरुबोटका धनसिंह मगर (५४) । उनको वास्ताबिक नाम नसिबलाल मगर हो । उनि अहिले हर्कपुर – ओखलढुंगा सडकमा हेरालुको काम गर्छन् । मानेभञ्ज्याङ्ग बजार देखी जेरुङ्ग गाउँ सम्मको तिन किलो मिटर सडकको नालि सफा गर्ने, खाल्डो पुर्ने, ढुंगा, पहिरो पन्छाउने उनको दैनिकी हो । उनि शनिबार बाहेक विहान देखी बेलुका सम्म सडकमै भेटिन्छन । यो काम गरे बापत उनले मासिक १६ हजार दुई सय तलब थाप्छन । यस बाट उनले आफ्नो घर परिवारको गुजारा गरि रहेका छन् । उनले गाडि पिडितबाट सडक हेरालुको जागिर पाएका हुन् । सडक हेरालुको काम गर्नु भन्दा पहिले नसिबलालको कथा फरक छ । उनी चार वटा गाडिका मालिक थिए । उनको तिन वटा बस र एउटा ट्रक थियो । चार वटा गाडिको मालिक नसिबलाले सडक हेरालुमा पुगिन्छ भनेर कल्पना सम्म गरेका थिएनन् । कटारी–घुर्मी– सिद्धिचरण राजमार्गको निर्माण गरीरहेका नेपाली सेनालाई तरकारी र खसीको ठेक्का लिएका नसिबलालले अरु दुई साथिहरु संग मिलेर पुरानो बस किनेका थिए । उनको ठेक्का ओखलढुंगाको सेति देवीमन्दीर सम्मको थियो । नसिबलालका अनुसार २०५६ सालमा ठेक्काबाट कमाएको र घरको ७५ हजार लगानीमा बस किनेका हुन् । उनी भन्छन “गाडि किनेको चार वर्ष पछी अरु गाडि थपेको हुँ” । नसिबलाल लाई अहिले पनी ति गाडीहरुको नम्बर कण्ठ छ । ना १ ख ७७८४ नम्बरको ट्रक, बसहरु बा १ ख ८७१२ , बा १ ख ९५९३ र अर्काे ना १ ख ५४०८ रहेको उनले सरर सुनाए । नसिबलाल मगर सिद्धिचरण ट्रक व्यवसायी संघको सस्थापक अध्यक्ष र सगरमाथा बस व्यवसायी संघको सस्थापक सदस्य हुन् ।
घुर्मी कटारीको कच्ची सडकमा बस चलाउदै गरेका नसिबलाले १७ वर्ष अघि नेपाली सेनाको सहयोगमा दाश्रो नम्बरमा ओखलढ्ंगा बस भित्र्याए थिए । कच्ची सडकमा जोखिम मोल्दै सवारी चलाएको स्मरण ताजैछ उनलाई । साह्रै दुःख थियो गाडी चलाउन त्यो बेला, उनले भने “सडकको खाल्डो पुर्दै, बस धकेल्दै चलाईयो”।
पक्की सडकमा बस चलाउने उनको चाहाना नभएको होईन । तर त्यो उनको सपना अधुरो रह्यो । यती मात्र होईन ओखलढुंगा–काठमाण्डौ बस चलाउने नसिबलालको ईच्छा अधुरो छ । करिब एक महिनाको अन्तरालमै नसिबलालको एउटा ट्रक सहित तिन वटा बस सकिए ।
बा १ ख ९५९३ नम्बरको बसबाट सिरहाका एक यात्रु ओखलढुंगा जाल्पा मन्दीर नजिक झर्दा खुट्टा मर्कियो उपचारकालागि खर्च दिनुप¥यो । त्यसकै केही दिन पछी बा १ ख ८७१२ नम्बरको बसले मानेभञ्ज्यांगमा एक यात्रुलाई किच्दा दुई लाख ९५ हजार खर्च भएको मगरले बताए । उनले भने “घाईतेलाई तिन महिना सम्म ओम हस्पीटल काठमाण्डौमा उपचार गर्दा त्यसको खर्च आफैले व्यहोर्नु प¥यो” । विमाको समय सकिएकाले खर्च आफैले गर्नुपरेको उनको भनाई छ । यो घटना भएको महिना दिन वित्न नपाउदै नसिबलालको दुई आफन्तकै ज्यान जाने गरी ना १ ख ५४०८ नम्बरको बस टोक्सेलको भडारे खोलामा दुर्घटनामा प¥यो । थाक्ले देखी बरुणेश्वर रामपुर रिजर्भमा जन्ती जान आएकोे बस दुर्घनामा परेको हो ।
बिमाको अवधी सकिएकोले क्षतीपुर्ती आफैले दिनु परेको नसिबलाल बताउछन । मुद्धा मिलाउन प्रहरी, वकिललाई दिने पैसा बाहेक मृत्यु भएका दुईजनाको परिवारलाई दश लाख क्षतिपुर्ती दिएको उनले बताएकाे भिजन नेपाल साप्ताहिकमा खबर छ । यसरी तिन वटा बसहरु सकिएको मगरको ट्रक रमाईलो डाडामा लक्ष्मी पुजाका दिन जलेर सकिएको होे । नसिबलालले २०५६ सालबाट सुरुगरेको गाडी व्यवसाय २०६६ साल सम्म करिब १० वर्षको अन्तरालमा एक महिनाकै अबधिमा सकियो, उनी भन्छन् “कच्ची बाटो भएको बेला खाल्डो पुर्दै ढुंगा बोक्दै गाडि चलाईयो पिच भए पछी सबै सकियो” । मगर भन्छन “सजिलो होला भन्ने समयमा सबै सकियो” । नसिबलालले एउटा ट्रक र तिनवटा बसबाट मासिक ६ लाख भन्दा बढि आम्दानी गर्थे । नसिबलालले दर्जनौ युवालाई रोजगारीको अवसर दिएका दिए । आफ्नो सवारी साधनहरु सकिए पनी उनले क्यु राखेका छन् । ओखलढुंगा-काठमाण्डौका लागि क्यु किनेका नसिबलालले वार्षिक १२ हजार तिर्नेगरेका छन् । तर उनको गाडि छैन । उनको क्युमा अरुलेनै गाडि चलाईरहेका छन्, उनले सुनाए । अझै गाडि किन्ने सपना जिवीतै छ नसिबलाल भन्छन “त्यसैले क्यु राखेको” ।
गाडी सकिए पनी लागेको ऋण अझै बाँकी छ । त्यसको सावाँ र व्याज सडक हेरालु जागिर बाट तिरीरहेका छन् । अब करिब डेढ लाख ऋण बाँकी रहेको उनले बताए । गाडिमा काम गर्ने स्टाफहरुले खाएको खाना र गाडिको सामानहरुको पैसा अझै तिर्न बाँकी छ । “पक्की सडकमा गाडि चलाउने रहरत अझै छ” उनले भने “गाडि किन्न सकिन्दैन होला” । कच्ची बाटो भएकै बेला गाडि सकिएको उनको भनाई छ ।
जागिरको खोजीमा भारतिय सैनिकमा भर्ति भईसकेका नसिवलाल छोडेर घर फर्केका हुन् । कक्षा आठ पास गरेका मगर भारतको लिबुङ्ग क्याम्पमा भर्ति भएका थिए । दुई महिना जागिर खाएर नेपाल फर्केको उनी बताउछन् । अहिले उनी ५४ वर्षको भए । उनी भन्छन् “नाम नसिवलाल भए पनी नसिबले राम्रो साथ दिएन”